दशैँ मानौ तर अस्पताल पुग्नबाट बचौं – सेफ लक्ष्मण भण्डारी
एनआरएनएको विवाद परराष्ट्रले हेर्न पाउने, सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश अस्वीकार⚡एनआरएनए संरक्षकहरुको बैठकद्वारा छानबिनपछि मात्रै निर्वाचन गर्ने निर्णय⚡पछिल्लो २४ घन्टामा थप १२३९ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि⚡दाहाल र केडियाको अर्थमन्त्रीलाई सुझाव : कृषिमा विदेशी लगानी ल्याउँदा बिचार गर्नुपर्ने⚡डा. आदित्य जोशीको नयाँ गीत ‘मिठा मिठा बात’ सार्वजनिक⚡राष्ट्रिय फोटो पत्रकार समूह, (एनएफपिजे नेपाल) को केन्द्रीय अध्यक्षमा प्रदीपराज वन्त⚡मिसन भण्डाफोर को शुभारम्भ आज⚡प्याब्सन काठमाडौँ महानगरपालिकाको अधिवेशन असोज १६ गतेलाई स¥यो⚡कांग्रेस अधिवेशन: काठमाडौ –४ को ईकाइ सभापतिमा दोहोरिए : न्यौपाने⚡आज २०७८ साल असाेज ७ गते, बिहीवारको राशिफल
प्रकाशित मिति : १८ आश्विन २०७६, शनिबार १४:३८
नेपालमा मनाइने पर्वहरूमध्ये हिन्दूहरूको महान चाँड भनेकै बडा दशैँ हो । मान्यजनहरुको हातबाट टीका र आशीर्वाद थाप्ने र मिठोमसिनो खाने पर्वका रूपमा यसको चिनारी रहँदै आएको छ । यो पर्वमा नयाँ लुगा लगाउने र मासुका लागि सिङगै खसी ढाल्ने होडबाजी नै चल्ने गर्दछ । विशेष गरी मासुका विभिन्न परिकार बनाएर खाने चलन हुन्छ । चाँडपर्वमा सानोसानो लापरवाहीले गर्दा दशैँ मनाउन भनेर आएका पाहुनाहरू बिरामी भएर अस्पताल भर्ना हुनुपर्ने अवस्था छ । सोही कारण दशैँमा मासुका परिकारको सावधानीपूर्वक र सन्तुलित प्रयोग गर्नुपर्छ ।
मासु एक पौष्टिक आहार हो,यसमा १४ देखि २० प्रतिशतसम्म प्रोटिन पाइन्छ । यसमा जिङ्क,भिटामिन बी, पोटासियमजस्ता तत्व पनि पाइन्छन् ।मासुबाट प्राप्त हुने तत्व त्यति सजिलैसँग भने प्राप्त गर्न सकिँदैन । हामीले राम्रोसँग सुरक्षित ढङ्गले राख्न नजानेमा त्यही मासुबाट विभिन्न किसिमका रोग उत्पन्न हुन्छ । खानामा दैनिक अत्यधिक रातो मासुको प्रयोगले मानिसको संवेदनशील अङ्ग मुटुमा असर पार्नुका साथै उच्च रक्तचाप निम्त्याउने र क्यान्सरको सम्भावना पनि बढाउँछ ।
खसी,बोका र मासु कसरी छान्ने ?
-हेर्दै नाम्ले परेजस्तो
-आँखा आवश्यकता भन्दा बढी रसिलो भएको,
-फनफनी घुम्ने खसी बोका छान्नु हुदैन ।
-मासु हलुका गुलाबी रङको हुनु हुँदैन ।
-मासु हरियो तथा प्याजी रङको भएमा त्यो खान अयोग्य मानिदैन ।
-मासुबाट कुनै पनि किसिमको अमिलो, बिग्रिएको, मन नपर्ने गन्ध आउनु हुँदैन
-मासु काट्दा र समाउँदा तन्केको जस्तो हुनुहुँदैन ।
-मासु किन्ने पसल, काट्ने मानिस, काटेको स्थान, अचानो, चलाएको हतियार सफा हुनुपर्छ । लगाएको पोशाक, काटेको तरिका, तराजु सफा हुनुपर्छ ।
मासु भण्डारण गर्ने तरीका
-मासुलाई अन्य पाकेका परिकारसँगै फ्रिजमा त्यतिकै राख्नु हुँदैन ।
-मासुलाई फ्रिजमा राख्दा जहिले पनि छोपेर राख्ने गर्नुपर्छ र कहिले पनि माथिल्लो भागमा राख्नु हुँदैन । माथिल्लो भागमा राख्दा मासुमा भएका कीटाणु -मासुमै हुने, तरल पदार्थ, हावामार्फत तल्लो सतहमा झर्न सक्छ । तल राखिएका अन्य खाना, पाकिसकेका परिकार, सागसब्जी, शाकाहारीका लागि तयार पारिएका(छुट्ट्याइएका परिकार, फलफूल तथा तरकारीमा पर्न सक्ने खतरा हुन्छ ।
-काँचो मासु र पाकेको मासु एकै स्थानमा राख्नु हुँदैन ।
-सकेसम्म मासुको प्रयोग गर्दा अधिकतम हरियो सागसब्जी खानु उचित हुन्छ ।
-मासु खानेबित्तिकै आइसक्रिम, दुध(दही, क्रिमका परिकार खानु हुँदैन ।
मासु खाँदा ध्यान दिनुपर्ने कुरा
-दशैँ भनेर धेरै मासु खाने चलन छ तर यो गलत प्रवृति हो । स्वस्थ मानिसले दिनभरमा १ सय ५० ग्राम मासु खानु उपयुक्त हुन्छ ।
-फ्रिजमा लामो समयसम्म भण्डारण गरेर राखिएको मासु सकेसम्म नखानुहोस्
-बासी तथा खुल्ला स्थानमा राखेको मासु नखाने
-काँचो मासुको परिकार होडबाजी गरेर कुनै पनि हालतमा नखाने
-पोलेका मासु ९सेकुवा, हाकु छोइला आदि० सकेसम्म नखाए कै राम्रो ।
-राम्ररी सफासँग पखालेको र राम्ररी पाकेको मासु मात्र खाने
-बोसो तथा छालारहित मासुको प्रयोगमा जोड दिने
-मसला तथा तेलीय पदार्थ धेरै प्रयोग नगर्नुहोस ,लसुन, अदुवा र हरियो खुर्सानी प्रयोग गर्नुहोस ।
-मासु खादा सलाद मुला, सलादपात र पुदिना बढी प्रयोग गर्नु राम्रो मानिन्छ ।
( लेखक सेफ लक्ष्मण प्रसाद भण्डारी सेफ फेडेरेशन अफ नेपाल पोखराका संस्थापक प्रमुख, ग्लोबल नेप्लिज सेफ फेडेरेशन कार्यकारी प्रमुख, होटेल तथा रेस्टुरेन्ट ब्यापार पाक कला परामर्शदाता तथा प्रशिक्षकका साथै कुलिनरि मोटिवेसनल इस्पिकर हुन् ।)